Dooddii Feylasuuf Roger Garaudy Iyo Meel Ka Dhicii Qowmiyadda Yahuudda!!! – IFIYE
“Illaahay baa mahad leh i baray islaamka ka hor inta aanan baran Muslimiinta ” Roger Garaudy (17 July 1913 – 13 June 2012),waana mid kamid ah hadalladii ugu wanaagsanaa ee laga qabto.
Sannadkii 1996-kii ayuu qoray Garuady qoraalkiisii caanka baxay ee “Les Mythes fondateurs de la politique israelienne” ama ” Khuraafaadka siyaasadda Israa’iil” kaas oo uu uga hadlayay been abuurrada ay Yahuudda taariikhdu ka sheegto.
Waxyaabaha aad ka uu uga dhiidhiyay waxaa kamid ah suurta galnimada ah in Lix milyan oo Yahuud ah lagu laayo dhacdadii “Holocaust” ee xasuuqii uu Hilter u geystay qawmiyadda Yahuudda, waxaana uu ku doodayaa in Yahuudda Ashkenazi ee degta dhulka Bariga Yurub ay tiro ahaan ka yaraayeen laba jibbaar inta ay taariikhda werineyso, taasna ay tahay been abuur cad oo sooyaalka ummadaha laga galayo.
Markii uu soo baxay qoraalkiisaas, maxkamadda sare ee dalka Faransiiska ayaa ku xukuntay in la mamnuuco qoraalkaas, lagana joojiyo faafinta dhigaallada qaabkaas u qoran ee loo hubiyay magaca xaqiiqa raadinta sida ay aaminsanaayeen; keliya joojin looguma ekeyn ee waxaa dheeri intaas ka ahaa in dhowr sano oo xabsi lagu xukumay, laguna ganaaxay lacag dhan 240,000 lacagta Faransiiska.
Maxkamadda racfaanka ee midowga Yurub ayuu u habar wacday, ha yeeshee waa lagu gacan seerray, taasn waxa ay keentay in uu waayo kalsooni badan oo uu ku dhex lahaa gudaha dalka Faransiiska.
Roger, Magaalada Marsiilya ee dalka Faransiiska ayuu ku dhashay dabshidkii 1912-kii, waana mid kamid ah filasuufyada ugu caansan dalka Faransiiska; 1982-kii ayuu ku qancay in uu qaato islaamka ka dib markii uu hasaawe la wadaag noqday gabadh Falastiinniyad ah, taas oo ku qalqaalisay in uu dhanka islaamka ugu yaraan soo qoorraansado.
Dhowr qoraal oo caan ah ayuu leeyahay, waxaana kamid ah ””The Christ of Paul is not the Jesus of the Bible,” kaas oo uu kaga hadlayo xaqiiqqada Nebi Ciise Cs. In uu islaamay iyo in uu xaas ka dhigtay gabadh Falastiinni ah ayaa keentay in Yahuudda iyo kooxaha kale ee Reer galbeedka ay il gooni ah ku eegaan Roger oo ahaa cod kar markiisii hore u guulwadeyn jiray shuuciyadda.
Intii uusan Islaamin ayuu wax badan ka bartay islaamka, qoraalka sawirka ka tarjumayanna wuxuu Ka hadlayaa xaqiiqada dhabta ah ee uu arkay markii uu islaamay, ha yeeshee ma ahan mid ay u siman yihiin Muslimka oo idil.
Sannadkii 2012-kii ayuu ku geeriyooday magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiska, waxaana loo sameeyay aas qaran oo aan innaba caadi ahayn.